AFHAYEENKA TALIBAN: ‘Haddii nabad la rabo madaxweynaha Afghanistan ha is-casilo’ – Calanka.com
Ururka Taalibaan ayaa sheegay iney dooneyn talada dalka Afghanistan iney xoog ku marookistaan, waxayna carrabka ku dhufteen iney marnaba suuragalayn nabad dalkaasi ka hanaqaado ilaa dowlad ku meel gaar ah la dhiso madaxweyne Ashraf Ghani-na xilka laga qaado.
General Mark Milley ma uusan inkirin Taalibaan inuu awood u lahaa Afghanistan oo dhan inuu la wareego xataa inti ay ciidamadoodu dalkaasi howlgalka ku joogeen.
“Waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo inaanan dooneyn inaan talada dalka Afghanistan xoog ku qabsanno sababta oo ah dowladaha waxay marar badan isku dayeen in awoodda dalka la qaybsado balse dadaalladoodi hal bacaad lagu lisay ay noqdeen.”
Suhail Shaheen wuxuu sida oo kale uu soo hadal qaaday dowladihi fashilmay uu Taalibaan maamulayey. Wuxuuna caddeeyey inuu ururkiisa dooneyn inuu markale uu qaato qaacidadii khaldaneyd uu horay ugu soo fashilmay.
Talaadadi khudbad uu Madaxweyne Ashraf Ghani uu ka jeediyey munaasabadda Bakrid wuxuu ku weeraray ururka Taalibaan. Ururka Talibaan oo hadalka Ghani ka jawaabayana waxay Ashraf Ghani ku tilmaameen nin dagaalka ka ganacsada.
Labaatan sana ka hor ururka Taalibaan marki uu ka arriminayey dalka Afghanistan gabdhaha waxaa loo diiday iney waxbartaan, halka shareecada islaamkana xoog lagu meel mariyey.
Dad badan ayaa ka cabsi qabo inuu soo noqdo xukunki ururka Taalibaan. Muwaaddiniinta Afghanistaan ee hantida haystana waxay dalbadeen fiisaha dal ku galka waddama kala duwan si ay dalka Afghanistan uga tagaan.
Ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada NATO ee Afghanistan ku sugnaa 95% dalkaasi wey ka baxeen iyada oo ciidamada aadka u yar ee haryana ayaa dalkaasi ka baxayaan 31-ka bisha August.